I-EasyJet indizela eGdansk, ePoland
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-EasyJet indizela eGdansk, ePoland
Airlines • isikhululo • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zaseJamani zokuPhula • iindaba • Iindaba zasePoland • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba eziHlumayo zase-UK
I-british yexabiso eliphantsi yaseBritane iJet ibhengeze ukungena kwayo eGdansk ngendlela entsha eya eBerlin-Tegel. Ukuthengiswa kwamatikiti sele kuqalile, ukongeza iGdańsk njengesikhululo seenqwelomoya i-160th kwinethiwekhi elula yeJet. Umcwangcisi uceba ukuphatha abagibeli abangaphezulu kwama-22,000 kwisizini yokuqala yehlobo. Iinqwelomoya ziya kuhanjiswa ngeenqwelo moya eziyi-A319 kathathu ngeveki, ngolwesiBini, ngoLwesine nangoMgqibelo.
Injongo ye-EasyJet kukwenza ukuhamba kube lula kwaye kufikeleleke, kwaye indlela entsha iya kuququzelela uphuhliso loshishino nokhenketho lokuzonwabisa phakathi kwezi zixeko zibini. Unxibelelwano phakathi kweGdansk neBerlin-Tegel lomeleza indawo elula yeJet ePoland, yongeza iGdańsk njengendlela ye-19 esuka ePoland nakwisikhululo seenqwelomoya i-160 esetyenziswa yi-EasyJet eYurophu.
“Sonwabile ngokuvulwa konxibelelwano olutsha lweGdańsk. Siqinisekile ukuba indlela entsha yaseBerlin ayizukuthandwa kuphela phakathi kwabakhweli abasuka eGdansk, kodwa iya kuzisa nezothutho zabakhenkethi ezivela eJamani, eziza kuba negalelo kuhlumo loqoqosho lommandla. Njengenqwelo moya ehamba phambili eYurophu, sonwabile ukomeleza uthungelwano lwethu ePoland, enkosi kule ndlela intsha, ngokoluvo lwethu eya kuthi ithandwe kakhulu kwaye isivumele ixesha elide, ukukhula okuzinzileyo kunye nokubonelela abakhweli ukhetho olubanzi lweendawo , zonke ngamaxabiso aphantsi kunye nenkonzo enkulu. ” utshilo uThomas Haagensen, uMlawuli we-EasyJet.
“Ukungena kwe-EasyJet's Gdansk sisipho esikhulu seKrisimesi. Xa indlela eya eBerlin ithe shwaka kunxibelelwano lwethu, ukuphendula imibuzo emininzi evela kubagibeli, saqinisekisa ukuba sizokuzama ukubuya kwayo, zombini phakathi kwabakhweli abahamba ngenqwelo moya kwisikhululo seenqwelomoya, kunye nabo sibamemayo eGdańsk. Namhlanje sonwabile kabini - samkela enye yezona zinto zibiza imali ngexabiso eliphantsi emhlabeni kwaye sinika abakhweli bethu unxibelelwano oluthembisiweyo neBerlin. ” Wongeze uTomasz Kloskowski, uMongameli weSikhululo senqwelomoya saseGdansk.